Help:Contents/Fayyida Barrefamotta Gubba - Wikipedia
Help:Contents/Fayyida Barrefamotta Gubba
Fayyida Barrefamotta Gubba
Kunii barrefamotta gubba fulla wikipediat argamanit
Log-in yoo tatte tajajilla bayee argachu dandetta
Yoo log-in hin tanne kan bakka kanat argamu log in/create an account kan jedhuu qofa, wa'ee kana ballinan ilaluuf kana bani. Yoo log-in tatte garuu kan asii gadii jirranit argamu
Maqaa Fayyadamtotta - Maqaan atii yeroo log-in tattu akka user name kankeettit fayyadamte bakka kanaatti argama. Kana banuun immo gara fulla kankee qofaa ta'e sii gessa. Fulla kana akka fedhii ketti midhagsu ni dandetta. Haa ta'u malee akka nami si barresu danda'u gochuu qabda, fakkena kiyya ilalli DE.
Dubii kiyya - Kunii bakka barrefama namii si barrese tartibaa guyyatiin itti argamu dha.
Fedhii kiyya - Wa'ee kana ilaluuf Fedhii Kiyya banii.
Tartibba-jijjirama kiyya - Yoo barrefama tokko barresitte fixee bodaa ilaluu kan jedhuu yoo tuqxe, akka barrefami suni ilalchaa kankee jalatti ta'u godhaa. Kuniis jijjirami namni biraa barrefama sunii irratti godhuu hunda bekku ni dandetta. Kunii immo kan itti argamu bakka tartibba-jijjirama kiyya jedhuu kanatti. Wa'ee kana ilalluf kana banii.
Keena kiyya - Yoo log-in tatee jiratee tatee, bakka kana banuun barrefamotta atti barresite si agarsisa. Haa ta'u malee yoo barrefama tokko log-in osoo hin ta'in barresite turtee ta'e, barrefami sunii akka keena ketiit hin fudhatamu. Wa'ee kana ballinan ilaaluf kana bani.
log out - Ergaa barresitee xumurtee bodaa log-out gochuu kee hin dedhiin.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Contents/Fayyida_Barrefamotta_Gubba&oldid=7254"
This page was last edited on 14 Waaxabajjii 2007, at 23:28.